خانه/فناوری اطلاعات/آیا گوگل پیکسل 6 آیفون دنیای اندروید خواهد بود؟
1 Fitaovana finday ho an’ny telefaona Pixel 6
2 Android 12; Ny fiovana lehibe indrindra amin’ny rindrambaiko Android tato anatin’ny taona vitsivitsy
3 Fanavaozana ny lozisialy 5 taona
Efa iray volana teo ho eo izay no nandrenesantsika voalohany ny tsaho momba ny finday andiany Pixel 6. John Praser, izay raisina ho iray amin’ireo mpanambara malaza indrindra eo amin’ny sehatry ny haitao, dia namoaka ny sarin’ireo telefaona ireo ihany koa, izay nahitanay ny fahitana ny sainam-pirenena tsara indrindra tamin’ny 2021. Ny andiany Pixel 6, izay misy maodely mahazatra ary mety Pro, dia nokasaina hamely ny tsena hifaninana amin’ny iPhone 13, mba ho tanteraka ny tsaho milaza fa hateraka iPhone amin’ny tontolon’ny Android aorian’ny 13 taona . Fa misy tokoa ny resaka sy fanakianana momba ity fanambarana ity, izay hodinihintsika avy eo.
Betsaka ny vaovao momba ny finday andiany Pixel 6. Google dia nanao gazety sy famoahana efa amam-bolana maro talohan’ny nisokafan’ny vokariny, fa raha ny piksel vaovao dia io no betsaka kokoa, ary somary tara noho ny nandrasana, ny fiparitahan’ny tsaho sy ny vaovao mifandraika amin’izany. . Na izany aza, nitranga izany, ary miorina amin’izy ireo, azontsika atao ny mamintina fa Google miaraka amin’ny andiany Pixel 6 dia manandrana manaraka tsara ny lalan’ny Apple sy iPhones eo amin’ny tontolon’ny Android.
John Praser, na izany aza, dia namoaka antsipiriany indray momba ireo telefaona ireo omaly, izay misy ny fampahalalana momba ny mombamomba azy ireo. Amin’ny ankapobeny dia tokony hanantena isika fa ny Pixel 6 dia mpifaninana amin’ny iPhone 13 ary ny Pixel 6 Pro dia mpifaninana amin’ny iPhone 13 Pro na Pro Max. Ny sainan’i Google dia mety nampitahaina tamin’ny sainan’i Apple teo aloha, fa amin’ity indray mitoraka ity dia tsy mitovy satria somary miavaka ny piksely; Raha ny marina dia tsara kokoa ny milaza, tena manokana!
Fitaovana finday ho an’ny telefaona Pixel 6
Mikasika ny rafitra fakantsary ampiasaina ao amin’ny Google Pixel 6 Pro, dia efa nisy ny tatitra fa ny vaovao voaray avy amin’i John Praser dia manamafy ny fahalalantsika amin’ity sehatra ity ary azo atokisana bebe kokoa. Toa ny finday Google vaovao (farafaharatsiny ny maodely Pro) dia hanana processeur 5nm fanao ho fo mitempo, izay vitan’i Samsung, misy dikany; Tsy afaka nifaninana tamin’i Apple i Google tamin’ny alàlan’ny fanampian’ny orinasa hafa, ary tsy fantatra mazava na hisy vokany ity fiaraha-miasa ity na tsia.
Raha miresaka momba an’i Samsung isika dia tokony hilaza ihany koa fa ny orinasa dia miasa amina processeur iray antsoina hoe Slide, izay ao amin’ny famaritana azy dia manondro chip avy ao amin’ny Exynos. Izy io angamba no mpikirakira Whitechapel fanao izay kasain’ny Google ampiasaina amin’ny piksel. Ny processeur dia hitovy amin’ny Exynos 2100 amin’ny andiany Galaxy S21, saingy toa mitovy amin’ny Snapdragon 870 amin’ny resaka herinaratra fikirakirana sy sary, ilay maodely overclocked an’ny Snapdragon 865 Plus. Noho izany, ny Pixel 6 Pro dia ho tsara kokoa noho ny sainam-pirenena tamin’ny taon-dasa tsara indrindra sy osa kokoa noho ny sainam-pirenena amin’ity taona ity. Raha tsy hoe manao fanatsarana betsaka toa an’i Apple i Google, amin’ny maha-mpanamboatra rindrambaiko sy fitaovana azy.
Marihina fa ny puce Snapdragon 870 dia mampiasa 8 core, ao anatin’izany ny core 1 Cortex-A77 miaraka amin’ny refy 3,2 GHz, ny 3 cores amin’ny karazany mitovy amin’ny haavo 2.4 GHz ary ny 4 cores an’ny karazana Cortex-A55 miaraka amin’ny hatetika an’ny 1 ‌ 8 GHz. Etsy ankilany, ny Snapdragon 888 dia tsy vitan’ny mandroso kokoa amin’ny resaka lithography (5 vs. 7), fa eo amin’ny lafiny teknolojia sy karazana core (1 Cortex-X1 core miaraka amin’ny refy 2,84 GHz, 3 Cortex-core ihany koa. cores A78 miaraka amin’ny refy 2,4 GHz ary cores 4 an’ny karazana Cortex-A55 miaraka amin’ny refy 1.8 GHz). Ka voajanahary ho an’ny pixel ny ho malemy kokoa noho ny sainam-pirenena voalohany amin’ny resaka fanodinana sy ny fahombiazan’ny sary.
Raha afaka manambatra fitaovana sy rindrambaiko tsara i Google, raha jerena fa ny Android 12 dia rafitra fiasa haingam-pandeha sy voavoatra ary eo amin’ny toerana tena tsara amin’ny lafiny kalitao sy fiarovana, dia mety hanana traikefa miavaka amin’ny asa miaraka amin’ny fitaovana matanjaka. . Omeo rafitra mpampiasa Android ny mpampiasa; Raha oharina amin’ny Pixel 5, izay mpikirakira Snapdragon 765G afovoany.
Mazava ho azy, ny Pixel 5 dia tsy telefaona ratsy mihitsy; Avy amin’ny hafainganam-pandehan’ny fahombiazany ka hatramin’ny fahaizan’ny rindrambaiko, ity finday ity dia nanana fahaiza-manao tsara, fa raha te hampitaha azy amin’ny tsara indrindra eny an-tsena tamin’ny herintaona isika dia azo antoka fa tsy nisy holazaina ity finday ity. Raha tsy niasa tamin’ny lozisialy flagship fotsiny i Google, dia ho voavaha ny ampahany betsaka amin’ny olany satria zavatra maro toy ny fampisehoana marin-toerana eo ambany fanerena mavesatra, fampisehoana manokana, fampisehoana fakan-tsary ary zavatra maro hafa dia miankina amin’ny processeur, fa ho an’ny Pixel 5 dia tsy fikirakirana. Nihevitra izy fa matanjaka ny fakana an’ity vokatra ity amin’ny sokajy sainam-pirenena. Na izany aza, toa afaka hifaninana amin’ny herin’ny tsena indray i Google amin’ny Pixel 6 sy 6 Pro.
Ny chip ampiasaina amin’ny andiany Pixel 6 dia nataon’i Samsung ary ny fahaizany dia mitovy amin’ny an’ny Snapdragon 870.
Ankoatr’izay, ny Pixel 6 sy Pixel 6 Pro dia azo inoana fa ho hita amin’ny modely samihafa miaraka amin’ny 512/256 / 512GB fitehirizana anatiny, na dia toa 512GB aza no ho an’ny modely Pro ihany. Ary ny habetsaky ny RAM izay hapetraka eo akaikin’ilay processeur voalaza dia 8 GB ho an’ny maodely mahazatra ary 12 GB ho an’ny maodely Pro, izay tena mety amin’ny sainam-pirenena.
Raha ny vaovao farany navoaka dia toa ny Pixel 6 sy Pixel 6 Pro dia hanana fampisehoana roa miaraka amin’ny famaritana samihafa. Ao amin’ny maodely mahazatra dia hahita tontonana misy vahaolana 1080P isika ary amin’ny maodely Pro dia hahita tontonana misy vahaolana 1440P. Ity tranonkala ity dia navoakan’ny tranokala 9to5Google, izay tranokala malaza ihany koa. Hisy lavaka kely ihany koa ao amin’ny fampisehoana Pixel 6 Pro izay ahafahan’ny fakantsary mitifitra amin’ny famaha 4K. Voalaza ihany koa fa ny flash LED dia natao ho an’ny fakantsary selfie, izay mbola tsy hitantsika tamin’ny famoahana azy. Fa ny fampidirana endri-javatra toy izany, izay tsy dia be mpampiasa amin’ny telefaona ankehitriny, dia mety ho tena mahaliana.
Tsy misy teny amin’ny fakantsary ao amin’ny tontonana aoriana, fa voalaza fa hitombo ny haben’ny sensor-ny raha ampitahaina amin’ny taona lasa. Matetika i Google dia nanandrana ny tsy nilalao isa ary nandefa ireo findainy tamin’ny sensor na lehibe 8 na 16 megapixels. Saingy tamin’ity indray mitoraka ity dia toa mikasa ny handinika sensor lehibe kokoa izy, farafaharatsiny ho an’ny modely Pixel 6 Pro, izay manana sensor sensor telefaonina fa afaka manandratra avo 5 heny amin’ny optika.
Ary koa, araka ny vaovao farany, ny fakantsary an’ity telefaona ity dia afaka manatsara im-7 in-5 eo am-panaovana sary amin’ny zana-kazo 60 isan-tsegondra. Mandritra izany fotoana izany, ny taranaka teo aloha, ny Pixel 5, dia afaka nanao zoom in sy nivoaka in-5 sy in-3 tamin’ny lohahevitra tamin’ny 30 sy 60 frame isan-tsegondra, ary hitantsika fa misy fivoarana betsaka amin’ity faritra ity. Ho fanampin’izay, amin’ny lafiny rindrambaiko izay niavaka tamin’ny Google hatrany teto amin’ity faritra ity, dia hahita fanatsarana marobe isika fa indrisy tsy manana fampahalalana betsaka momba ny antsipirian’ny olana isika amin’izao fotoana izao.
Android 12; Ny fiovana lehibe indrindra amin’ny rindrambaiko Android tato anatin’ny taona vitsivitsy
Ny ampahany mahaliana indrindra amin’ny tantara dia ny ampahany amin’ny lozisialy; Izay ahitantsika ny Android 12 ho toy ny rafitra fiasa tsy misy fangarony, izay ny rafitra fandidiana Google tsara indrindra sy ny hafainganam-pandeha sy kalitao raha oharina amin’ireo kinova taloha. Amin’izao fotoana izao ny Pixel dia vonona hanana processeur Powered Snapdragon 870, ny traikefa Android 12 dia tsy hitovizany amin’ireo handset ireo.
Toy ny mahazatra, ny andiany Pixel 6 dia natao ho finday voalohany hampiasa ny kinova ofisialin’ny Android 12. Midika izany fa haseho miaraka amin’ny andiany Pixel 6 ny kinova ofisialin’ny Android 12. Vao tsy ela akory izay, navoaka ny kinova beta iray an’ity rafitra fiasa ity, izay toa nanana ny fanovana betsaka indrindra izay heverina fa amin’ny kinova farany.
Ny fanovana resahina dia misy ny fijery UI, sarimiaina, endrika kisary, widgets, menio fanovana, safidy on / off, sary an-tsary, lohahevitra, teti-doko, fampiharana, endrika lozisialy, sy maro hafa. Talohan’izay dia nandinika ny sasany amin’ireo fiasa amin’ny Android 12 izahay, izay naneho fa ity kinova ity dia tena iray amin’ireo kinova Android tsara indrindra navoaka.
Ny fahagagana manokana Google ho an’ireo mpankafy Android dia ny fahombiazany sy ny hafainganan’ny Android 12, izay voalaza fa gaga ny mpampiasa. Satria toa ny fanaraha-maso bebe kokoa no ampiharina amin’ny fampiharana mandeha. Etsy ankilany, Google dia azo inoana fa hanavao ny findainy amin’ny rafitra fiasa vaovao mandritra ny telo taona mahery, na amin’ny tranga ratsy indrindra mandritra ny telo taona.
Samir Samat, filoha lefitry ny fitantanana vokatra ho an’ny Android sy Google Play Store, dia nampitaha ireo hetsika teo aloha tamin’ny olona roa izay miresaka amin’ny fotoana iray ihany. Amin’izany fomba izany, ny telefaona antonony na teti-bola, ary indraindray aza ny sainam-pirenena dia mandany fotoana betsaka kokoa noho izay tokony hialany amin’ny filan’ny mpampiasa. Vokatr’izany, ny vokatra miorina amin’ny Android dia matetika miadana kokoa noho ny iPhones, izay toa tsy misy intsony amin’ny andiany Pixel 6 sy Android 12, ary ny zava-drehetra dia hozahana amin’ny fomba tsara indrindra. Ankehitriny isika dia tsy maintsy mahita ny ady eo amin’ny Android sy ny iOS!
Fanavaozana ny lozisialy 5 taona
Ny tena mahaliana ary mampahafantatra antsika ny ezak’i Google ho tonga Apple dia ny fanavaozana ny lozisialy maharitra, izay heveriko manokana fa singa iray tena lehibe amin’ny fividianana finday avo lenta. Ny vaovao mikasa ny hanohana ny rindrambaiko ho an’ny sainan’i Google mandritra ny 5 taona dia navoakan’i John Praser ary toa marina.
Ny antony lehibe heverinay fa tena marina ity vaovao ity dia satria ny Samsung sy ny OnePlus dia manavao ny sainan’izy ireo amin’ny rafitra fiasa vaovao mandritra ny telo taona. Mazava ho azy, Samsung koa dia manohana ny sasany amin’ireo interface-interface mandritra ny telo taona. Ka ho an’ny orinasa toa an’i Google, izay mpamorona lozisialy mihitsy, tsy misy dikany mihitsy ny fanohanana ny sainam-pireneny mandritra ny telo taona. Etsy ankilany, mba ho lasa orinasa matanjaka, sokajy tena ilaina ny fanohanana ny lozisialy ary tsy tokony hamaivanin’ny Google izany mihitsy.
Raha izany no izy, dia mbola ho tanteraka ihany i John Praser, izay marina matetika. Google dia azo antoka fa ho lasa iray amin’ireo mpanamboatra finday mahomby indrindra, farafaharatsiny eny amin’ny tsena izay ampiarahana amin’ny iPhone ny andiany Pixel 6. mandeha eny an-tsena, ny mpampiasa hafa dia tsy handeha amin’ny iPhones fotsiny noho ny fanavaozana ny lozisialy. Satria farany amin’ny tontolon’ny Android, vokatra iray no hita fa, toy ny iPhone, dia mbola mahazo fanavaozana ny fiarovana sy ny rindrambaiko mandritra ny 5 taona.
Mahaliana ny mahafantatra fa hatramin’izao dia mbola tsy nisy orinasa nanolo-tena hanohana ny findainy toa an’i Apple, ary tamin’ity taona ity dia hitantsika fa na ny fanohanan’ny findain’ilay orinasa aza dia mety hahatratra 5 taona mahery! Samsung dia nitombo io vola io tamin’ny 2 ka hatramin’ny 3 taona, izay mbola tsara, saingy tsy ampy ny natiora. Ny hetsik’i Google hanavao ny telefaoniny amin’ny kinova Android vaovao toy izany dia hanisy tsindry tsy amin’ny Apple ihany fa amin’ireo orinasa mamorona telefaona Android; Indrindra fa i Google dia afaka manitatra ny orinasany amin’ny sehatry ny fitaovana ary miditra tsena marobe kokoa.
Miaraka amin’izany, handray soa ny mpampiasa amin’ny farany. Ireo orinasa toa an’i Nokia, Motorola, Xiaomi ary ny hafa dia azo inoana fa hiditra amin’ny laharan’ny orinasa izay manavao ny sainam-pireneny mandritra ny telo taona farafahakeliny. Mandritra izany fotoana izany, Samsung dia mety manapa-kevitra ny hampiakatra ny tahan’ny telo taona ho efatra na dimy taona aza, izay mety tsara.
Mazava ho azy, izany rehetra izany dia fanombatombanana bebe kokoa fotsiny ary raha ny tena izy dia ny faniriantsika te-ho tonga zava-misy. Orinasa maro, toa an’i Samsung, no mampiasa hoditra samihafa antsoina hoe UI. Rehefa avy namoaka kinova Android vaovao izy ireo dia tsy maintsy ovain’ny orinasa arakaraka ny hoditra irina, ary maharitra ela ity dingana ity. Izany no antony itiavan’ny orinasa sasany mandany fotoana kely hanohanana ny findainy. Raha ny marina, ny tena antony anohanan’ny Apple be loatra ny telefaoniny dia ny tsy fisian’ny fiasa toa ny interface amin’ny mpampiasa sy ny zavatra toa izany.
Na eo aza izany fanamby izany, raha misy ny Google, dia hahita lafy tsara kokoa isika. Ankehitriny dia tsy maintsy miandry isika hijery raha tena hitranga izany ary raha tena afaka mijoro amin’ilay iPhone malaza miaraka amin’ny andiany Pixel 6 eo alohan’i Apple i Google. Mety tsy misy ny piksela eny amin’ny tsena rehetra, mety lafo izy ireo, fa raha ekena izany politika izany dia hanatsara ny zava-bitany ny orinasa Android hafa hijanona ho mpifaninana, ary eo no hisitraka tombontsoa ny mpampiasa rehetra.
Loharano: (۲, PhoneArena (۱